Nye GIMP anya nke Photoshop | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Oge gara aga egosiri m gị otu nye GIMP anya nke Photoshop CS6Otú ọ dị, ọghọm nke usoro ahụ bụ na ọ na-etinye windo nke GIMP agba ọchịchịrị. Typedị nhazi a ma ọ bụ Tweaks, ha na-adaba adaba inyere aka na Mbugharị na mmegharị nke ndị ọrụ nke Photoshop gaa ngwa Isi Iyi.
Via Ntanetị 8 Achọpụtara m banyere ụzọ ọzọ iji mee ya, oge a, na agba agba; Ma ọbụghị naanị nke ahụ, mana ugbu a, anyị nwere ike iji ụzọ mkpirisi keyboard dị ka Photoshop na akụkụ akụkụ ya ka etinyere n'otu ụzọ Adobe ngwaọrụ. Nke a bụ nsonaazụ na KDE m:
El Hack na-abịa site n'aka +Martin Owens kwuru ma ọ dị mfe itinye ya n'ọrụ n'ihi na ihe anyị ga-eme fọrọ nke nta ka dochie folda nhazi GIMP na nke ọhụrụ.
Site na itinye mbanye anataghị ikike a, anyị ga-atụfu mmasị na nhazi nke anyị kọwarala na GIMP
1 Nye GIMP lee Photoshop
2 Gbanwee mgbanwe ndị ahụ
Ihe anyi aghaghi ime bu inweta peeji nke Martin Owens na Deviantart na budata faịlụ na-esonụ (nke m na-ahapụ na njikọ ya kpọmkwem).
Budata Photoshop Tweaks maka GIMP
Ozugbo ebudatara anyị na-aga n'ihu ịme ndabere nke folda nhazi GIMP anyị na / ụlọ anyị.
Emepụtara ntọala ndị a maka GIMP 2.8, yabụ ọ bụrụ na ị jiri GIMP 2.9 (ma ọ bụ ụdị ọ bụla na mmepe), ọ bụghị ihe niile ga-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, mkpirisi keyboard ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma na enwere obere nsogbu na akara ngosi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ya na mbipute dị elu karịa 2.8, ihe anyị ga - eme bụ:
Ugbu a, anyị na - emeghe faịlụ ebudatara na ụlọ / ebe obibi anyị, ebe o nwere folda akpọrọ .gimp-2.8 ọ bụkwa ya.
Ọ bụrụ na anyị ejiri ụdị GIMP dị elu, anyị ga - edetuo folda .gimp-2.8 na ~ / .config / GIMP / wee nyegharịa ya 2.9, nke ahụ bụ:
Nsonaazụ dị ịtụnanya n'ezie.
Gbanwee mgbanwe ndị ahụ
Golaghachi azụ naanị anyị ga-eweghachite nchekwa ndị anyị kwadobere:
rm -r ~ / .gimp-2.8 mv ~ / .gimp-2.8-ochie ~ / .gimp-2.8
Maka GIMP 2.9 +:
Ma nke ahụ bụ ya. Cheta na ụzọ mkpirisi keyboard nwere ike ịgbanwe yana ụfọdụ nhọrọ na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nye GIMP lee Photoshop
Eziokwu bụ na ọ bara ezigbo uru ịme ya na otu ìgwè nke ndị anaghị eji ngwa windo ọtụtụ. Ha na-eme mkpesa nke ukwuu banyere nke a na GIMP.
GIMP gbanwere na Window Nanị ya na nhọrọ nchịkọta nhọrọ dị mfe kemgbe ụdị 2.8
Ọ bụghị naanị maka Windows na-alụbeghị di, mana banyere akara ngosi na otu esi hazie ogwe.
Ee, m ghọtara na site na post gị gara aga, mana m na-aza n'ihi na, na-agụ ihe Jorge-1987 na-ekwu na m na-aguputa: «Eziokwu bụ na ọ bara ezigbo uru ime ya na otu ìgwè nke ndị mmadụ anaghị eji ngwa ngwa ọtụtụ window. Ha na-eme mkpesa nke ukwuu banyere nke a na GIMP. ”Ma, dị ka m ghọtara, ọ na-arụ ụka na ihe na-egbochi ha bụ ọnọdụ ọtụtụ window; ọ bụghị ihe dị iche na akara ngosi ma ọ bụ nhazi nke ogwe. Amaghị m ma m kọwaa onwe m. Naanị ihe ọ zara bụ ihe onye ọrụ jiri dee ya kpọmkwem.
Ah ee ee .. M ghọtara 😛
Ọfọn, n'ụzọ ahụ ị na-eri ohere n'akụkụ abụọ nke ihuenyo ahụ, na-ahapụ oghere efu na ala ... belụsọ ma inwere ihu ihuenyo 28-inch, echeghị m na ọ bara uru.
Ugbu a gbalịa wepu mkparịta ụka agba na igbe ngwaọrụ (igbe abụọ ahụ nwere agba isi na nke abụọ) n'ụzọ dị otu a ị nwere ike belata igbe ọrụ na otu akara ngosi (obere) na Windows, ị na-eweta okwu ụcha na kọlụm aka nri ya na akwa na wdg.
Site n'ime nke a ị na-echekwa ọtụtụ ohere na nyocha 21-anụ ọhịa kpochapụwo.
Ihe nlere nke otu m nwere ya: https://farm8.staticflickr.com/7364/16217560217_76e24b0546_c.jpg
Ezigbo mma post 😉
Site n'ụzọ Elav, amaghị m ma ọ ga-abụ naanị m, mana achọpụtara m na ịpị onyonyo ndị a anaghị agbanwe nha ma yabụ enweghị ekele maka nkọwa ahụ, ha kwesịrị ime ihe gbasara ya.
Pụtara ihe oyiyi na post?
Ọfọn ọ bụrụ na ọ bụ ya, agbanweela m nha 😉
Eeh, ndi ahu ... Ugbua akowaputara ihe ndia. Ọmarịcha !!
Ederede dị na ogwe aka ekpe, n'okpuru onye na-atụgharị agba, enweghị ike iwepụ, enwere ike? Echere m na ị wepụrụ ya site na njide site na idezi ha, n'ihi na kama enwere obere ọnyá na ụda isi awọ.
wụnye hover mbugharị ndọtị na ihe nchọgharị gị, ọ ga-azọpụta gị ọbụna pịa, ọ na-arụ ọrụ maka ọtụtụ saịtị.
Ana m ahapụrụ gị usoro akara ngosi akara ngosi maka Gimp nke m chịkọtara n'oge gara aga:
Na ya onwe ya, kama iji akara ngosi Photoshop, aga m eji akara ngosi Symbolic. Ha ka mma, nwekarị otu na oge gara aga akwadoro m ma hazie ngwugwu abụọ, otu maka isiokwu desktọọpụ ọkụ na nke ọzọ maka isiokwu gbara ọchịchịrị:
Nwere ike ibudata ha ebe a:
Daalụ Jesusda !!! na Ekele Desdelinux maka ihe ọ bụla ị mere. Meghee Isi mmalite N’ebe niile Obodo !!! 🙂
Enwere m GIMP 2.8.10 ọ naghị arụ ọrụ m.
Hichapụ ~ / .gimp-2.8
Ma kpochapụ folda .gimp-2.8 site na ZIP na ~ /
Ma ọ naghị arụ ọrụ m, ọ bụ ezie na m na-ehichapụ nhazi na m nwere. Kedu ihe m na-emehie?
PS: Anọ m na Ubuntu 14.10
Kwesighi ihichapụ folda .gimp-2.8, ị ga - e copyomi isiokwu ahụ na .gimp-2.8 / themes / folder
Pej: isiokwu ihe atụ ga-adị na:
.gimp-2.8 / gburugburu / ihe atụ-gimp
Ọ bụrụ na ihichapụ ihe niile .gimp-2.8, ị ga-efunahụ ntọala Gimp niile ị nwere.
Original na n'efu Malague freeos dijo
Yabụ na ọ na -eyingomi ọdịnaya nke folda isiokwu ahụ /usr/share/gimp/2.0/themes/photoshopware
Zaghachi na mbụ na n'efu Malagueños
Maazi ụgbọ mmiri dijo
Amamiihe amamiihe. Dị ka CGArtist, anaghị m eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na m chọrọ Mbugharị (dị ka o kwere mee), iji nweta sọftụwia n'efu, mana mgbanwe ahụ na-esiwanye ike mgbe nhazi na ya niile gbanwere. Ahụrụ m Krita n'anya n'ihi nke ahụ.
N'otu aka ahụ, dị ka Photoshop… M na-eche maka ezigbo ojiji nke a ngwaọrụ karịrị retouching njehie (n'ihi na anyị na-ama nwere Lightroom ma ọ bụ ọchịchịrị maka retouching). Maka ihe m na-eme site n'oge ruo n'oge (2D textures), m na-ahọrọ Krita.
Zaghachi Maazi Ulo
Diego echegharị dijo
Onwe m achọghị usoro ma ọ bụ mmemme iji yie ndị ọzọ.
Zaghachi Diego Redero
Daalụ nke ukwuu, m na-eji Gimp ogologo oge, na-enweghị nnukwu ọkachamara na ojiji ya, mana ejisiri m ike tinye ya na obere ọrụ m, eserese, ugbu a enwere m ike ibunye ndị ọrụ ibe m ka ha mee mkpebi ịmalite iji ya. Cheee enyi!
Ọ masịrị m, ana m eji ntọala a ogologo oge, ọ bụ ezie na n'ihi ihe ụfọdụ, ọ na-abawanye oge ọ na-ewe iji mechie GIMP, mgbe ụfọdụ ọbụlagodi ozi na-egosi na mmemme ahụ anaghị azaghachi na sekọnd ole na ole emesịa ọ mechara mechie.
Amaghị m ma ọ bụ naanị ya na-eme m.
Zaghachi Akira Kazama
Ndewo Jesus, enweghị m ekele maka mgbanwe ọ bụla mgbe m na-amalite Gimp, na ntụle, ọ na-eme m otu ihe ahụ dị ka gị, imechi nnọkọ ahụ ma ọ bụrụ na windo ịdọ aka ná ntị ngwa ahụ pụtara maka oge na-anaghị azaghachi na-arịọ maka mmechi ahụ ma na-emechi onwe ya na-enweghị mkpa enyemaka m. dị ka ọ ga-adị na mbụ.
Ọ dị ịtụnanya, a na-eme ya naanị na laptọọpụ ochie m, ọ bụghị na kọmputa m nwere desktọọpụ ugbu a, yabụ o nwere ike ịbụ n'ihi enweghị ego ... kpachara anya! Amaghị m ihe akụrụngwa ị nwere, naanị m na-ekwu maka nke a dabere na ahụmịhe m mgbe m nyochachara mod na kọmputa m abụọ.
Echiche ọ bụla sitere n’aka onye tozuru etozu?
O mere m dịka Athlon II X2 ochie m ugbu a, na FX 6300 m dị ugbu a, ihe dị ịtụnanya bụ na oge mbụ m malitere GIMP, ọ mechiri emechi na kọmputa abụọ, ọ bụ site na mbido nke abụọ ka ọ na-ewe oge iji mechie.
Ezigbo, bara ezigbo uru ebe m na-arụ ọrụ, daalụ nke ukwuu.
Obí Isaac dijo
Nke ahụ, ọ bụghị na enweghị m mmasị na atụmatụ GIMP, ọ bụ na enweghị m mmasị na a ga-enwe taabụ nnwere onwe 20
Zaghachi Isaac Palacio
Ihe ojoo banyere Gimp, o nwere ndọtị ọkọlọtọ XCF,… na ọ naghị ekwe ka ịgbanwee JPG, nke dị ọkụ.
Site na onye ọrụ Debian na ArchLinux nke mbu, ekele gi site na… FreeBSD Unix.
Usoro GIMP bụ XCF, nke bụ ihe na - enye gị ohere ịchekwa njirimara niile nke faịlụ gị dịka ọkwa, ụzọ, wdg.
Site na nhọrọ mbupụ na mbubata ị nwere ike gbanwee ma chekwaa JPG, PNG ma ọ bụ GIF n'etiti ọtụtụ usoro.
Site n'ụzọ, na-eji oyi akwa ọ dị mfe ịme GIF animated ma ọ bụ mepụta PDF
Ugbu a, echere m na ị kwesịrị ilekwasị anya na KRITA. Amaghị m ihe kpatara m ji ahụ ya nke ọma karịa gimp n'ụzọ niile.
Nwere ike ịmalite ebe a
banye na nke a
gaa na biapam ebe a bu agu
Saịtị a na usoro aghụghọ ya. Gimp na-amasị m yana site na iji windo jikọtara ọnụ achọghị m ya ka ọ dị ka onye ọzọ.
n'ihi na ụdị windo ọ na-arụkwa?
Ee, ọ na-arụkwa ọrụ.
Moddị mod a dị mma ... ọ na-enye Gimp ihe obi ụtọ.
Ilekwasị anya n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka nke a n'echiche m dị oke mma, ahụrụ m ya nke ukwuu na ụdị windo "otu window" mana ọ nwere obere mgbanwe ... akara ngosi nke ebe «ngwaọrụ» n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enye ya ọmarịcha anya, (na gị Jesus ikike M ga-anwale Dpixel kwa maka ogwe ngwaọrụ, site n'ụzọ blog gị yiri ihe na-atọ ụtọ ma m gbakwunye ya na ọkacha mmasị m), ihe nwute na n'akụkụ nke ọzọ na na menu anyị na-ahụ akara ngosi ndị na-emebu ihe na-agbagha ihe na ndị ọhụrụ akara ngosi nke mod a nyere, n'aka nke ọzọ, na-eweta nhọrọ nke ngwaọrụ na brushes na taabụ na ebe akwa ahụ, yana akụkọ ihe mere eme nke onyonyo na onyonyo mepere emepe na ala, ọ dị ka ọ nwere ọfụma ma dịkwa mma.
N'ọnọdụ ọ bụla, Fans nke windo dị iche iche nwere nhọrọ nke ịmeghe ọnọdụ "otu windo" na menu "windo" iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Gimp mbụ.
Anwalewo m na obere 10 ″ Hp m na akụkụ dị ala na-apụ n'anya, ya mere, ịnwe nhọrọ nke inwe ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na windo dị iche iche ga-enwe ekele, na aka nke ọzọ na desktọọpụ kọmputa m ebe m nwere nyocha 17 where Nke a "photoshopped" otu window mod anya mara mma: S ... lol, dị nnọọ na-adaba na a ikwu ga-adị mma maka a widescreen.
Aga m ele Krita anya dị ka ọ dị ezigbo mma, ọ bụ ezie na ọ bụ KDE, na-etinye ya na Xubuntu amaghị m ... mana eziokwu bụ na m lere anya na weebụsaịtị ya ma echeghị m na m ga - emegide ya. Echere m na ọ bụrụ na ọ wụnye m KDE ọba akwụkwọ tinye ngwa na nchịkọta ndị ọzọ nke m na-achọghị ma na-egbochi m ịnwale ngwa na mpaghara a.
Enwere m olileanya inyere mmadụ aka na ụdị nyocha a nke m na-atụnye na ebumnuche nke ime obere m ruo n'ókè ihe ọmụma m kwere m.
Daalụ DesdeLinux maka ntinye a na ekele ndị niile na-aza ajụjụ na-eme ka ụbọchị nke ọ bụla mụta ntakịrị, na-eme mkpebi site na ebe a na ebe a… 🙂